FANAFIHANA TAO ISOANALA RN-13 : Maty voatifitra ny mpamily, voaroba avokoa ny entan’ny mpandeha
Nahazo vahana sy nandravarava tany amin’ny lalam-pirenena faha-13 iny indray ireo andian-jiolahy mpanakan-dalana, ny alarobia alina hifoha alakamisy lasa teo. 14 février 2020
Araka ny loharanom-baovao voaray dia fiarabe « carandal » na ireny kamiao lehibe navadika ho mpitatitra olona nitondra mpandeha niainga avy eto an-drenivohitra Antananarivo ka nihazo an’i Taolagnaro no voatafik’ ireo olon-dratsy telopolo mahery nitam-piadiana. Teo amin’ny tanànan’i Manakilova Tsimitsoy, Kaominina Isoanala, Distrikan’i Betroka no niseho izany ka avy hatrany dia nanao tifitra variraraka ireo jiolahy mba hampijanonana ny fiara. Vokany, voatifitra teo amin’ny kibony ny mpamily ary dia naratra mafy izay nitarika ny fahafatesany taorian’ny ora vitsy.
Etsy ankilany, voaroba daholo ny entana sarobidin’ireo mpandeha, toy ny vola sy firavaka, fitaovana lafo vidy. Voalaza tamin’ny fanazavana voaray hatrany aza moa fa anisany very tamin’io fotoana io ihany koa ny fananan’ireo atleta solontenan’ny Faritra Anosy izay vao avy niatrika fifaninanam-pirenena tao Antsirabe, Faritra Vakinankaratra iny. Ankoatra ny fanafihana fiara, mbola nanohy nanafika tanàna teo amin’ny manodidina indray ireto mpandroba ka olona miisa roa tompon’omby no voatifitra. Nahatsikaritra ity fanafihana ity moa ny Zandary teo an-tanàna nony avy eo ka tonga dia nitifitra ireo jiolahy, nisy voa izy ireo saingy mbola tafatsoaka ihany.
Banner lehibe Gauche 200px × 200px (68231) 24 février 2020 Banner faharoa 500px x 70px (646) 24 février 2020 Zazavavy 15 taona niteraka tsy fidiny tamin-drainy niteraka azy FANOLANAN-JANAKA (395) 21 février 2020 Tafakatra 150 000Ariary ny saran-dalana POTIKA TANTERAKA NY LALAM-PIRENENA RN1 BIS (175) 21 février 2020 Lehilahy 01 nanolana zazavavikely miisa 02, misandoka ho tsy salama saina ANDAPA (84) 20 février 2020 Tovolahy iray naratra voafaokan’ny moto, nitsoaka ny nahavanon-doza ANKADIKELY ILAFY (77) 21 février 2020